CD & DVD & USB gaari – Windows – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaari
CD & USB kale
Ashampoo Burning Studio BILAASH – waa qalab lagula shaqeeyo discs qaabab kala duwan. Software-ka wuxuu taageerayaa kaydinta iyo soo kabashada xogta lumay.
AOMEI PXE Boot – waa fududahay in la isticmaalo softiweerka waxaa loogu talagalay in lagu xareeyo oo lagu hayo kumbuyuutarrada iyada oo loo marayo shabakad maxalli ah oo ay wadaagaan.
Abgx360 – aalad lagu hubinayo diskiga iyo sawirrada sawirrada ’Xbox 360’. Software-ka wuxuu taageeraa habka tooska ah ee qaladka-sixitaanka sawirada diskka ka dib marinka ilaalintooda.
Khamriga 120% – tasiilaad si loo abuuro sawirada diskka iyadoo la kaashanayo qaabab kala duwan. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu gubo xogta diskka isla markaana uu dhaafo ilaalada nuqul.
Agabka in la abuuro bootable flash drives. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan faylasha rakibo ku socota xogta loogu rakibo ee software ama nidaamka qalliinka.
Ku haboon qalab si ay u aqoonsadaan faylasha qarsoon laga shakiyo on sidayaal kala duwan ee macluumaadka. Software soo bandhigayaa warbixin horumarka iyo files helay.